Pkg2appimage: ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် AppImage ဖိုင်များကိုမည်သို့တည်ဆောက်ရမည်နည်း။ | Linux မှ
Pkg2appimage: ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် AppImage ဖိုင်များကိုမည်သို့တည်ဆောက်ရမည်နည်း။
၎င်းသည်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်အသုံးပြုလေ့ရှိသည် အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း operating system များအထူးသဖြင့်၌တည်၏ GNU / Linux များ၏ပုံစံများအတွက်၎င်း၏အများအပြားမျိုးကွဲ၌တည်၏ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (Distros)သီးခြားပြင်ပ application တစ်ခုကိုတပ်ဆင်လို။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်၎င်းကို လုပ်၍ မရပါ GNU / Linux Distro သို့မဟုတ်ယင်း၏ဗားရှင်းနံပါတ်နှင့်အတူ။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် application ကို install လုပ်ချင်တဲ့အခါငါမကြာသေးခင်ကပဲ၊ အဲဒီလိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ် packet ကို Tracer 7.xx။ သူ့အကြောင်း Debian Distro 10ငါ့ Distro MX Linux ကို ၁၉.၃။ သုသေသနပြုခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းများပြုလုပ်ပြီးနောက်တွင်အခြားပြင်ပမှအထုပ်များကိုတပ်ဆင်သည် Distros (Ubuntu / Debian) နှင့်လုပ်နေတာ «ခေတ်မမီတော့သော» (downgrade) packet နှင့် library ကို အသုံးပြု၍ redirected variable ကို $ LD_LIBRARY_PATH နှင့်သင်္ကေတလင့်များဖန်တီးခြင်းအရာအားလုံးသည်ငါ tool ကိုအသုံးချသည်အထိ, အသုံးမကျဖြစ်ခဲ့သည် Pkg2 ပုံ.
ပထမ ဦး စွာဖိုင်အမျိုးအစားသို့မဟုတ်နည်းပညာကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်းသည်ကောင်းသည် AppImage အဖြစ်လူသိများသည်အဘယ်အရာကိုပိုင် "GNU / Linux အတွက် Universal Applications"။ အပြင်၌ဤအမည်အောက်တွင်ထည့်သွင်းထားသောပုံစံများအနက် AppImageသူတို့တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားကိုရှာပါ Flatpak y snap။ အချို့မှာ packet နည်းပညာဟုလူသိများသည် OrbitalApps.
1 AppImage ဆိုတာဘာလဲ။
2 Pkg2appimage: AppImage အပလီကေးရှင်းများဖန်တီးရန်ကိရိယာ
2.1 Pkg2appimage ကိုအသုံးပြုခြင်း
2.1.1 A.- အဆင့် 1
2.1.2 ခ - အဆင့် ၂
2.1.3 C.- အဆင့် 3
2.1.4 D.- အဆင့် ၄
2.1.5 E.- အဆင့် ၅
ထို့ကြောင့် AppImage သည် GNU / Linux ပေါ်တွင်သယ်ဆောင်နိုင်သော software ဖြန့်ဝေရန်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည် လျှောက်လွှာကိုထည့်သွင်းရန် superuser ခွင့်ပြုချက်များမလိုအပ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်, ခွင့်ပြုနှင့်လွယ်ကူချောမွေ့ရန် binary software ကိုဖြန့်ဖြူး, ထို၏လွတ်လပ်သောဖြစ်ပါတယ် GNU / Linux Distros။ ဘယ်ဟာ developer များနှင့်အသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
"အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုကိုကူးယူပါ၊ ၎င်းကို executable လုပ်၍ ဖွင့်ပါ။ ၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ System libraries နှင့် system preferences တို့ကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ။ Firejail လို sandbox ထဲမှာလည်း run နိုင်ပါတယ်။ သင်၏ Linux desktop application ကို AppImage ပုံစံဖြင့်ဖြန့်ဝေပြီးသာမာန် Linux ဖြန့်ဝေမှုများကိုအသုံးပြုသောသုံးစွဲသူများကိုရယူပါ။ တစ်ကြိမ်ထုပ်ပိုးပြီးနေရာတိုင်းကိုပြေးပါ။ အဓိက desktop ဖြန့်ချိမှုအားလုံးတွင်သုံးစွဲသူများထံရောက်ရှိသည်". https://appimage.org/
AppImage တွင် "AppImageHub" အက်ပလီကေးရှင်းစတိုးရှိသည်။
AppImageLauncher - အသုံးချပရိုဂရမ်များကို Appimage တွင်အလွယ်တကူဖွင့်နိုင်သည်
Pkg2appimage: AppImage အပလီကေးရှင်းများဖန်တီးရန်ကိရိယာ
၏ developer များအရ AppImage နည်းပညာ ၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်၎င်းကိရိယာကိုတရားဝင်အသုံးပြုသည် AppImageKit Format အောက်မှာခြစ်ရာကနေ applications များတည်ဆောက်ရန် .AppImage။ ဤအတောအတွင်းအခြားပုံစံများအောက်တွင်ဖန်တီးပြီးသားအခြားသူများ၏ AppImage အပလီကေးရှင်းများကိုတည်ဆောက်ရန် (ပြောင်းလဲရန်) ထိုကိရိယာကိုအသုံးပြုပါ Pkg2 ပုံ.
ကျွန်တော့်ဖြစ်ရပ်မှာ၊ ငါဆောက်ချင်တာ .AppImage လျှောက်လွှာ၏ packet ကို Tracer 7.xx, ငါမှာဖော်ပြထားတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအသုံးပြုဖို့ဆက်လက် Pkg2appimage နှင့် Packet Tracer ရှိ Konradmb ၏ GitHub သိုလှောင်ရုံ.
သုံးပြီး Pkg2 ပုံ
စာရေးသူပြောတဲ့အတိုင်း၊ သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ command commands နဲ့အတူကျွန်တော်ဟာအောက်ပါအဆင့်တွေကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ် -
A.- အဆင့် 1
Packet Tracer အတွက် .yml ဖိုင်သိုလှောင်မှုပုံတူကူးယူပါ
ခ - အဆင့် ၂
Pkg2appimage tool ကို download လုပ်၍ ၎င်းကို executable လုပ်ပါ
C.- အဆင့် 3
၏အကြောင်းအရာကို update လုပ်ပါ .yml ဖိုင် ဖိုင်အသစ် download လမ်းကြောင်းနှင့်အတူ အစုံလိုက်သုံး packetလက်ရှိ download လမ်းကြောင်းကိုဖိုင်မဆံ့ပါဘူးအဖြစ်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် nano console editor ကိုအောက်ပါအတိုင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
ထိုအခါဖြစ်ရမည် မှတ်ချက် (# နဲ့ပိတ်ပါ) အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအတိုင်းခေတ်မမီတော့သောမျဉ်းကြောင်းနှင့်အထက်တစ်ကြောင်းကိုမှန်ကန်စွာရိုက်ထည့်ပါ
D.- အဆင့် ၄
အထုပ် Build .AppImage del အစုံလိုက်သုံး packet ကဖော်ပြသည် .yml ဖိုင်
E.- အဆင့် ၅
အထုပ်ကို run .AppImage del အစုံလိုက်သုံး packet ဆောက်လုပ်ထားသည်။ အတူတူပင်၊ အကယ်၍ အရာအားလုံးမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ပြီးပြီဆိုလျှင်၊ လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိရမည်။
ကွပ်မျက်ခံရသောအခါ, သင်သည်သင်၏မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်ပါတယ် AppImage app အသစ် အခက်အခဲမရှိပဲအောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း -
MX Linux 19.1 အဖွဲ့ (Debian 10 - Buster ကိုအခြေခံသည်)
GNU / Linux Debian 10 အဖွဲ့ (Buster)
ဒီသင်ခန်းစာနှင့်စမ်းသပ်မှုများနှင့်အမှားအယွင်းများလုပ်ပြီးသောအခါများစွာသောသူတို့သည်ကိုယ်ပိုင် application တည်ဆောက်နိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည် .AppImage သုံးပြီး Pkg2appimage ။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Pkg2appimage»ဖန်တီးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကိရိယာတစ်ခု installation ဖိုင်များ ပုံစံအောက်မှာ applications များ၏ AppImage အသုံးပြုခြင်း binary files (tar.gz, .deb or .ppa) လက်ရှိနှင့်တစ် ဖော်ပြချက်ဖိုင် .yml ပြောင်းလဲခြင်းအောင်မြင်ရန်; အများကြီး အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုတစ်ဖွဲ့လုံးအတွက် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Pkg2appimage: ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် AppImage ဖိုင်များကိုမည်သို့တည်ဆောက်ရမည်နည်း။
အလွန်ကောင်းသော post ကို! စပိန်စကားပြော Linux အသိုင်းအဝိုင်းသည် AppImage ပုံစံကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းကျွန်ုပ်တွေ့ရ။ ဝမ်းသာပါသည်။ ကျွန်တော်အလှူငွေအနည်းငယ်ပေးချင်ပါတယ် pkg2appimage tool သည်ခဏတာဖြစ်ခဲ့ပြီးချို့ယွင်းချက်အချို့ရှိသည်။ အထင်ရှားဆုံးမှာရရှိလာသောအစုများသည်၎င်းကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုသောစနစ်ထက် glibc နိမ့်သောဖြန့်ဖြူးရာတွင် အသုံးပြု၍ မရပါ။ ထို့ကြောင့်အခြားစွမ်းဆောင်နိုင်သောအခြားကိရိယာတစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
ပုံဆွဲတည်ဆောက်သူ (https://appimage-builder.readthedocs.io) pkg2appimage သည် yml ဖိုင်ကို configure လုပ်ရန်လိုသည်။ စာရွက်စာတမ်းများတွင်သင်မည်သို့အသုံးပြုရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်ခန်းစာကိုတွေ့နိုင်သည်။ အမြဲတမ်းသင်အမြဲတမ်းမေးနိုင်သည်၊ မေးခွန်းများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ဝမ်းမြောက်စွာရှင်းပြပါမည်။
Alexis လိုပက်ဇ် Zubieta
Alexis ကိုနှုတ်ဆက်သည်။ ဆောင်းပါးအပေါ်သင့်ရဲ့အပြုသဘောဆောင်မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ pkg2appimage အတွက်သင်ပိုမိုခေတ်မီသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေဖြင့်သင်အကြံပြုသောကိရိယာအကြောင်းမကြာမီဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ကြွင်းသောအရာအတွက်၊ သင်နှင့် AppImage စီမံကိန်းမှအခြားသူအားလုံးအတွက်ကောင်းချီးများစွာရရှိစေပါ။
Viejuber YT ဟုသူကပြောသည်
သူငယ်ချင်းများ။ .appimage format နှင့်ကျွန်တော်မနှစ်မြို့ဖွယ်အတွေ့အကြုံရှိကြောင်းပြောပြသည်။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည် balena etcher (ကျွန်ုပ်၏ KDE Neon တွင်) ကို install လုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်ကံမကောင်းသည်မှာယခု၎င်း၏ Linux ဗားရှင်းတွင်သာလာသည်။ ငါ install လုပ်ပြီးသား၊ အဲဒါကိုဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီမှာပြstartedနာကစတင်ခဲ့တယ်။ အိမ်မှာ Applications လို့ခေါ်တဲ့ဖိုဒါတစ်ခုဖန်တီးခဲ့တယ်။ အကယ်လို့သင်အဲဒါကိုပယ်ဖျက်ရင်တောင်၊ reboot တခုပြီးတိုင်းပြန်ဖွင့်လာတယ်။ သင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဖန်တီးထားသောလျှို့ဝှက်ဖိုင်များကိုရှာဖွေရန်တစ်ရက်ထက်ပိုကြာသည်။ ခန်။ ငါ့အတွက်၊ ဒီပုံစံကတခြားပရိုဂရမ်တွေထက်ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့တူတယ်။ နောက်ပုံစံတစ်ခုထပ်နေတာဟာနောက်ပြောင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
Viejuber YT ကိုစာပြန်ပါ
Viejuber YT ကိုနှုတ်ဆက်သည်။ အဲ့တာရှက်စရာပဲ။ ငါပြinstalledနာများမရှိဘဲ AppImage နှင့်အတူ Balena ကို install / uninstall လုပ်ပြီး, AppImage မကောင်းတဲ့ပဏာမခြေလှမ်းသို့မဟုတ်ဆိုးဆိုးရွားရွားအကောင်အထည်ဖော်ပဏာမခြေလှမ်းကြောင်းတကယ်မယုံကြည်ခဲ့ပေ။ သင်မည်သို့သွားသည်ကိုကြည့်ရန်ပိုမိုကြိုးစားသင့်သည် ...
ဒီ post အပေါ်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ PacketTracer ကိုကျွန်ုပ်၏ LMDE4 တွင်အလုပ်လုပ်ရန် (Debian 10) အရူးလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ငါ PacketTracer 7.2.1 အတွက်အောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့် 7.3.0 အတွက် libjpeg.so.8 နှင့်အချို့သောအခြားအရာများကဲ့သို့တူညီသောမှီခိုမှုပြwithနာများအတွက်ကြိုးစားလျှင်ကျွန်ုပ်ပြတ်တောက်သွားသည်။
Javi42 ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ မင်းရဲ့မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ပို့စ်ကခင်ဗျားအတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်။
Open နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေဆဲ။ ကျွန်ုပ်သည်သက်ဆိုင်ရာ .desktop ကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားသော်လည်း၎င်းသည်% f,% F သို့မဟုတ်% U အငြင်းအခုံကိုကောင်းစွာမရရှိနိုင်ပါက၎င်းကို parameter တစ်ခုအနေဖြင့်ကူးပြောင်းလိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဲဒါအောင်မြင်ခဲ့ပြီလား
Ultimaker Cura - 3D ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်မော်ဒယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောလျှောက်လွှာ